MUUQAAL SAMO: TALLAABO CAJIIB AH IYO SAWIRO TAHRIIB - THE INDIAN FACE
Sawir gacmeedka naxdinta leh ee Samo Vidic
Dad aad u yar ayaa ku guuleystey in ay ku daraan damacyadoodii oo dhan mid isla markaana ku guuleystey in ay u rogaan qaab nololeed. Hagaag, taasi waa waxa saxda ah sawir qaadaha iyo jaceylka isboorti xad dhaaf ah, Samo vidic, wuxuu ku kasbaday ficilkiisa cajiibka ah, xiisaha iyo sawirada isboortiga, oo leh qaabkiisa cajiibka ah, midka gaarka ah iyo hal abuurka, wuxuu ku guuleystaa inuu u sheego sheekooyin xusuus leh isagoo codkiisa siinaya daqiiqadaha ka dambeeya sawir kasta.
"Waan jeclaa sawir qaadista, laakiin sidoo kale wax walba oo la xiriira isboortiga iyo banaanka, sidaa darteed fikradda ayaa isla markiiba i soo jiidatay," ayuu yidhi. Samo vidic.
Dhalashada Slovenia oo asal ahaan ka qalin jabisay injineer makaanik ah, Samo vidic Wuxuu ka bilaabay adduunka sawir qaadista 1999. Wuxuu had iyo jeer aad u xiiseeyaa isboortiga, yaraantiisiina wuxuu la jaanqaadi jiray qaar ka mid ah sida teniska, kubbadda cagta iyo booska barafka.
Markii uu xiiseynayay sawir qaadista, isaga oo 17 jir ah wuxuu bartay muraayadaha indhaha, kaamirooyinka iyo filimada qaab iskiis wax u baray, wuxuuna si dhakhso leh isugu barbaariyey aqoon si uu u gaaro shaqada ugu habboon, isku darka saxda ah ee dareenkiisa. Markii uu jiray 23 wuxuu horeyba uga shaqeynayay sidii sawir qaade xirfadlayaal u ah shirkado muhiim ah sida Red Bull® (2005), taas oo u kaxayn doonta inuu u safro oo uu sawiro cayaaraha xiisaha leh, ciyaartooyda ficilka iyo muuqaalka guud ee adduunka.
Maaddaama aan ahay sawir-qaade is-baray, barashada farsamooyinka ugu fiican ee isboorti kasta way adkeyd, laakiin isla waqtigaas runtii waan ku riyaaqay. Runtii aad baan u shaqeeyey, wax walbana waan sameyn lahaa si aan u noqdo sawir qaade isboorti. Hamigeygii ugu horreeyay wuxuu ahaa inaan sawir sawir isboorti u sameeyo wargeys maxalli ah, wixii intaa ka dambeeyayna wax walba wey sii dheeraadeen. Waxaan marwalba doonayay inaan waxyar kasii sare maro, walina waan samaynayaa, ayuu yidhi ninka laftiisu. Samo Vidic.
Wuxuu hadda yahay safiirka Canon®, oo wax ku biiriya shirkadaha sida Getty Images®, wuxuuna kamid yahay kooxda Limex Images®. Intaa waxaa dheer, shaqadiisa sawir-qaade isboorti, wuxuu sameeyaa ololeyaal xayaysiis isboorti ah oo lala gelayo shirkado heer caalami ah oo heer caalami ah, isagoo ka soo muuqday joornaallo caan ah sida ESPN®, ka baxsan y L'Equipe.
Samo vidic sidoo kale isagu waa abaabulaha iskiis isu magacaabay 'Samo Vidic Photo Workshop', oo sanad walba lagu qabto hareeraha harada Lake Bohinj, wadankiisa hooyo ee Slovenia. Intaas waxaa sii dheer, wuxuu ahaa ku guuleystaha tartankii sawir ee saxaafadda Slovenia marar kala duwan iyo 2013 wuxuu ku guuleystey qeybta "Baalasha" ee Red Bull Illume Sawirka Weydiinta.
Mashruuciisii ​​ugu dambeeyay, sawir qaade Samo Vidic wuxuu rabay inuu xooga saaro dadaalkiisa ku aadan soo bandhigida waaxda isboorti ee hada la iska indhatiray: ciyaartooyda naafada ah. Ruuxiisa horumarineed ayaa u horseeday inuu jiheeyo hamigiisa sawir qaadista isla markaana u adeegsado awooda sawirka inuu u sheego sheekooyinka runta ah, xaqiiqooyinka ka gudbaya bulshada.
"Saxaafadda aad ayey ugu yartahay joogitaanka ciyaartoyda naafada ah," ayuu yidhi. Samo vidic. Ciyaaraha Paralympic waxay u badan tahay oo kaliya inay helaan 5% dareenka la siiyay Ciyaaraha Olombikada. Waxaan rabay inaan sawiro noocyada kale ee isboortiga jecel, si dadku u ogaadaan, una sheegaan sheekooyinka layaabka leh ee noloshooda. ”, Ayuu yiri sawir qaadaha.
Sidan oo kale, Samo wuxuu ku sawiray a koox naafo ah si loo abuuro loona jiheeyo dareenka warbaahinta iyo dhagaystayaasha guudba awoodeeda ciyaareed iyo caqabadaha ay ahayd inay ka gudbaan, inkasta oo ay ka soo dhalaalaan kana dhex muuqdaan dunida isboortiga. Waxaa ka mid ah:
Dabaasha reer Slovenia Darko Duric, wuxuu ku dhashay hal gacan iyo lugaha.
Orodyahankii indhaha la'aa ee Libby Clegg, British iyo billad dahab ah oo ka soo hoyiyay Ciyaaraha Paralympic.
Duuliyaha reer Ingiriis Anoushé Husain, wuxuu dhashay isagoon lahayn dhudhun midig. Iyo skater-ka reer Brazil ee Felipe Nunes, oo lugaha ku waayey shil yaraan.
Waxaan rabay inaan muujiyo noocyada kala duwan ee ciyaartooyda oo aan u sheego sheekooyinkooda xiisaha leh, ayuu yiri sawir qaadaha.
Sawirada Samo Vidic runti waa kuwo saameyn leh, firfircoon oo hal abuur leh, u dabaaldegaya nolosha, waxqabadka, iyo sheekooyinka dhiirrigelinta leh ee go'aan qaadashada.
Laakiin waxaan tixraacnaa imtixaannada! Halkan wax yar oo dheeraad ah oo ku saabsan shaqada sawirrada cajiibka ah ee Samo vidic, sawir qaade
Lucas Gilman iyo sawir gacmeedkiisa naxdinta leh
Kasbashada waligeed nama baxsato hadaan nahay waqtiga saxda ah iyo goobta. Kani waa sawir qaadista tallaabada Lucas Gilman! Guji oo soo hel sawirradiisa ugu fiican iyo farsamooyinka sawir qaadista.
Sawir qaade ZAK NOYLE Surf
Zak Noyle waxaa maanta loo arkaa mid kamid ah sawir qaadayaasha adduunka ugu wanaagsan. Iyada oo ku saleysan Jasiiradda O'ahu ee Hawaii, Zak waxay ku takhasustay sawirrada badda iyo sawirrada badda
Dhagaxyada dhagaxyada leh Chechu Arribas
Fadhiga dhagaxa aniga waa mid ka mid ah anshaxyada aan ugu jeclahay waana midda ugu dheer ee aan ku bartay sida isboorti, sidaa daraadeed u gudbida sawirkeyga fuulista dhagaxa waxay ahayd geedi socod
Jaime de Diego iyo qaabkiisa adrenaline-ka buuxo
Sawirradayda ayaa soo jiidanaya dareenka (ugu yaraan taasi waa waxa ay dhahaan) marka loo eego isbarbar dhigga weyn, isticmaalka bilicda iyo waxyaabaha la soo saaray ee aadka loo bartay. Iyagu waa xubno muhiim ah oo aan jeclahay inaan ku shaqeeyo, taasna aniga